• B.E (သို့ ) A.G.T.I ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ • Electrical Engineering နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံး(၅)နှစ်ရှိရမည်။ • Electrical ပိုင်းဆိုင်ရာ Es...
Marketing Executive and Engineer
Announcement, Employer Job Offer, Jobs, Wanted | yamonnarkhin | February 17, 2014
၀န်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။(ပြည်တွင်းအတွင်းသာ) (1)Engineer (2)ဦး (ဘိလပ်မြေ survey ကျွမ်းကျင်၊siteအတွင်းဖြစ်သော ဘိလပ်မြေ၏ အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ြေ...
Business Directory, Business Services, Events, Events, Fashion and Lifestyle, Free Business Listing, Other Services, Services, Video and Music | johnaung | January 28, 2014
elysium music event offer service for dj.party,music production with world known software hearware.offer the great service in yangon.especially charity event p...
Announcement, Business Directory, Business Services, Events, Events, Fashion and Lifestyle, Free Business Listing, Hotels and Tourism, Myanmar Places, Services, Tour Guide, Website Submission | nainglinhtut | January 14, 2014
City FM ရဲ့ Tip Top အစီအစဉ်မှ မြန်မာပြည် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွက် Tour de Myanmar ရဲ့ ခရီးစဉ်အသစ်တွေ၊ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ ဝန်ဆောင...
Announcement, Other Stuffs to Sell, Services, Stuff for Sale, Wanted | thurahtun | January 11, 2014
အင်တာနက်ဆိုင်နှင့်ကွန်ပြူတာဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လိုသူများအတွက် သတင်းကောင်း။ အင်တာနက်ဆိုင်နှင့်ကွန်ပြူတာဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လိုသူများအတွက် ပစ္စည်းစုံပြန်လည်ရောင်းချရန်ရှိ...
YANGON INTERNATIONAL EXPO 3.1.14 to 6.1.14(4 days) TATMADAW HALL
Announcement, Business Directory, Events, Events, Exhibition, Other Stuffs to Sell, Stuff for Sale, Wanted | Daruma Store | December 31, 2013
မိတ်ဆွေများခင်ဗျား။ Yangon International Expo 3-1-2014~ 6-1-2014 (4day) TatmadawHall မှာ ဒါရုမ က ၀င်ရောက် ပြသ အထူးနူန်းနဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ရောင်းချပါမယ်။ လာရောက်အ...
All times are GMT 6.5. The time now is 11:47 am.